Mishonga Midziyo Vatengesi uye Fekitori - China Mishonga Midziyo Vagadziri
Roller Type Yekumhanyisa Al / Pl Blister Packaging Machine
DPH-260 Roller Rudzi Rwekumhanyisa AL / PL Blister Kurongedza Muchina Zvemagetsi zvirevo: Kugona (punchi / nguva) 60-200 Range rekurohwa (mm) 20-120 Kurongedza zvinhu: Pharmacy PVCPTP Alu foil (mm) (0.2-0.4) * 260 (0.02-0.05) * 260 Cleam yakamanikidzwa mweya 0.5-0.7Mpa Mhepo yekushandisa (m³ / min) .50.5 Simba AC380V 50HZ 18.1KW Mvura inotonhorera yemvura 1.5P ine 60L / h yekushandisa Dimension (LW * H) (mm) 4860 * 1070 * 1750 Net huremu (kg) 3000 Zvinyorwa zvemuchina: Kushanya kwefekitori:
[Kopa] Rg2-110c Soft Gelatin Capsule Kuzadza Mashini
RG2-110C Soft Gelatin Encapsulation Machine RG0.8-110C MUENZANISO Chigadzirwa Tsananguro. 2. Iyo mold inotora iyo avhiyesheni aruminiyamu chiwanikwa, hupenyu hwakareba hupenyu. Gonesa dhizaini, mamwe maburi eforoma, yakadzika mambure-gelatin chiyero. 3. Iyo gelatin jira dhiramu vhiri, gelatin jira mafuta system uye chakuvhuvhu kutora yakafanana dhizaini, yakakwira kugadzikana. Iyo inotora yakazvimirira inoshanduka f ...
Rg2-110c Yakapfava Gelatin Encapsulation Machine
Otomatiki Sirasi Huchi Jam Ketchup Shampoo Liquid Blister Kurongedza Muchina
Dpp-80 Chemishonga Midziyo Liquid Blister Packaging Machine 1. Chigadzirwa Mufananidzo 2. Zvimiro: 1. Inotora iyo nyowani mhando mhando yepamusoro-simba yekufambisa nzira kurongedza ngetani uye kutyaira huru yekutyaira shaft. Iko kukanganisa uye ruzha rweimwe giya vhiri rekufambisa rinogona kudzivirirwa. 2. Kunze kwekutonga system kunogamuchirwa; zvakare inogona kuve yakagadzirirwa kuona uye kurasa basa chishandiso (Omron Sensor) Dpp-80 Kugadzira Yemishonga Kurongedza Kuteedzera / Package Pack Machine, Blister ...
Dpp-80 otomatiki Chemishonga Midziyo Capsule / Liquid / Choclate Blister Kurongedza Packaging / Package / Pack Machine
Dpp-80 Kugadzira Mishonga Yekutakura Muchina, Blister Kurongedza Mashini 1. Chigadzirwa Mufananidzo 2. Zvimiro: 1. Inotora iyo nyowani mhando mhando yepamusoro-simba yekufambisa nzira kurongedza ngetani uye kutyaira huru yekutyaira shaft. Iko kukanganisa uye ruzha rweimwe giya vhiri rekufambisa rinogona kudzivirirwa. 2. Kunze kwekutonga system kunogamuchirwa; zvakare inogona kuve yakagadzirirwa kuona uye kurasa basa chishandiso (Omron Sensor) Dpp-80 Kugadzira Yemishonga Kurongedza Packaging / Package Pack Mac ...
Yekumhanyisa Rotary Mishonga / Chikafu huku Soup Cube Piritsi / Piritsi / Munyu Kugadzira Press Machine
ZP25F Tablet muchina wekudhinda Sample Shandisa Iyi michina is electromechanical high-tech chigadzirwa chakagadzirwa pamusoro pemakore emakore otomatiki chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro 1.Iyakajairika chimiro chemidziyo yacho compact uye reas ...
Gel Capsule Kuzadza Machine
Semi Otomatiki Gel Capsule Kuzadza Mashini Zvimiro: Uyu muchina une magetsi uye chiutsi kune wekubatanidza kudzora, yakagadzirirwa zvemagetsi otomatiki counter kadhi yakakodzera kuzadza akasiyana epamba kana akaunzwa capsule. Inogona otomatiki kupedzisa chiitiko chenzvimbo, kupatsanura, kuzadza, kukiya for capsule, kudzikisa simba rebasa, kugadzirisa kugadzirwa kwekuita, zvinoenderana nechinodiwa chemushonga hutsanana. Icho chakakodzera michina ine hungwaru kunyatsoita dosi, novel ...
Semi Auto Capsule Kuzadza Machine
Semi Auto Capsule Kuzadza Machine Samples Zvimiro: Uyu muchina une magetsi uye chiutsi kune wekubatanidza kudzora, yakashongedzerwa nemagetsi otomatiki counter kadhi yakakodzera kuzadza akasiyana epamba epamba kana akaunzwa capsule. Inogona otomatiki kupedzisa chiitiko chenzvimbo, kupatsanura, kuzadza, kukiya for capsule, kudzikisa simba rebasa, kugadzirisa kugadzirwa kwekuita, zvinoenderana nechinodiwa chemushonga hutsanana. Icho chinhu chakakodzera michina ine hungwaru kunyatsoita muyero, nove ...
Zp33f / Zp35f / Zp37f Rotary Hwendefa Dhinda, Dhindaini Yekutsikirira Mashini Rudzi rweMishonga yeMuchina
Rotary Hwendefa Dhinda, Hwendefa Kudzvanya Muchina Type Pharmaceutical Machinery Sample Usage Iyi michina ndeye electromechanical yepamusorosoro chigadzirwa chakagadzirwa pahwaro hwemakore ekuzvigadzira chigadzirwa kuongorora kwakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro 1.
Hydraulic Press Hwendefa / Piritsi Dhinda Muchina
ZP31F Tablet muchina wekudhinda Sample UseThis michina is electromechanical high-tech chigadzirwa chakagadzirwa pamusoro pemakore emakore otomatiki chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Unhu1 Iyo yakazara mamiriro eiyo ...
Chemishonga Machina Hwendefa Kudzvanya Machine
Model: ZP27F Mishonga yeMuchina Hwendefa Kudzvanya Machine Sample: Shandisa Ichi chishandiso chigadzirwa chemagetsi chemhando yepamusoro chakagadzirwa pahwaro hwemakore ekuzviongorora zvigadzirwa zvekuongorora zvakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro 1. Iyo yakazara mamiriro ...
Otomatiki Hwendefa Kudzvanya Machine, otomatiki Piritsi Kudzvanya Machine
ZP29F Tablet muchina wekudhinda Sample UsageIyi michina is electromechanical high-tech chigadzirwa chakagadzirwa pamusoro pemakore emakore otomatiki chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro 1. Iyo yakazara mamiriro e ...